Vaovao - Mpanondrana akanjo lehibe i Sina, saingy mihena ny ambim-bolany
Mpanondrana akanjo lehibe i Sina, saingy mihena ny ambim-bolany
Amin'ny maha mpanondrana akanjo lehibe azy dia manondrana akanjo maherin'ny 100 tapitrisa dolara amerikana isan-taona i Sina, mihoatra lavitra noho ny fanafarana azy. Saingy, niaraka tamin'ny fanovana ny firafitra ara-toekaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, niditra tsikelikely tamin'ny sehatra matotra ny indostrian'ny akanjo, ary nanjary nanankarena tsikelikely ireo sokajy vokatra, nihena tsikelikely ny ambim-bavan'ny fanafarana akanjo sy ny fanondranan'i Shina.
Nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019, nihena tsikelikely ny haben'ny fanondranana akanjo any Shina. Araka ny antontan'isa avy amin'ny General Administration of Customs, tamin'ny taona 2018, ny sandan'ny fanondranana ny fitafiana sy ny kojakojany dia 157.812 miliara dolara amerikana (novaina tamin'ny tahan'ny fifanakalozana dolara-RENMINBI amin'ny volana nifanaraka), nihena 0,68% isan-taona. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Mey 2019, ny sandan'ny fanondranana ny fitafiana sy ny kojakojan'ny sinoa dia US $ 51.429 miliara, nihena 7,28% isan-taona.
Nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019, nitombo haingana ny fanafarana fitafiana sinoa. Raha ny antontan'isa avy amin'ny General Administration of Customs, tamin'ny taona 2018, ny sandan'ny sandan'ny akanjo sy kojakoja sinoa dia 8 261 miliara dolara amerikana, ary 14,80 isan-jato isan-taona izany. Nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny aprily 2019, ny sandan'ny fanafarana akanjo sy kojakoja sinoa dia 2,715 miliara dolara amerikana, tafakatra 11,41% isan-taona.
Ny indostrian'ny fitafiana sinoa dia aondrana any amin'ny EU, Etazonia, ASEAN ary Japon. Tamin'ny taona 2018, ny fanondranana fitafiana sinoa tany amin'ny UE dia nahatratra 33,344 tapitrisa dolara amerikana, narahin'i Etazonia sy Japon niaraka tamin'ny 32,153 miliara dolara amerikana ary 15,539 miliara dolara amerikana. Nanomboka tamin'ny fironana tato ho ato, ny fanondranana fitafiana sinoa any Etazonia sy Japon dia nitombo indray, raha ny fihenan'ny fanondranana any amin'ny Vondrona eropeana kosa nihahenjana, ary ny fanondranan'i Shina ny firenena sasany manaraka ny tsipika "One Belt And One Road" dia nankafy fitomboana tsara. Tamin'ny taona 2018, nitombo maherin'ny 40 isan-jato ny fanondranana an'i Shina tany Vietnam sy Myanmar, raha 11,17 isan-jato kosa ny 4,3 isan-jato ary 4,79 isan-jato ny entana naondrana tany Russia, Hong Kong ary ny Vondrona eropeana.
Raha ny fomba fijerin'ny vokatra fanondranana, araka ny antontan'isa azo antenaina, amin'ireo karazan'akanjo 255 navoakan'i Sina tamin'ny taona 2018, ny totalin'ny fanondranana vokatra 10 ambony dia mihoatra ny 48,2 miliara dolara amerikana, mitentina 30% amin'ny totalin'ny fanondranana sandany Anisan'izany, "pullover crochet vita amin'ny kofehy simika, cardigans, vest, sns." no vokatra naondrana indrindra, ary ny sandan'ny fanondranana an'io vokatra io dia mahatratra 10,270 miliara dolara amerikana amin'ny taona 2018.
Nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny aprily 2019, ny indostrian'ny akanjo ambony 10 any Sina dia mitentina 11,071 miliara dolara amerikana
Fotoana fandefasana: Sep-04-2020